ခရစ်စမတ်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း။ ? ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ကောင်မလေးတစ်ယောက်နှင့် Corta [ကြက်ခြေခတ်ပုံသဏ္န်]
နှစ်ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းခြင်း ယောက်ျားလေးနှင့်မိန်းကလေးအနေဖြင့်နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည်ဝိညာဉ်ရေးလုပ်ဆောင်မှုသက်သက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခံ့သောယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံသည်မှာတိုတိုနှင့်လှပသည်။
ကလေးဗတ္တိဇံခံခြင်း၌မိဘများသည်ငယ်ရွယ်စဉ် မှစ၍ သခင်ဘုရား၏အမှုတော်မြတ်ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်သွေးထိုးလှုံ့ဆော်ပေးသောယုံကြည်ခြင်းလုပ်ရပ်အဖြစ်ပြုလုပ်သည်။
2 ၁။ မိန်းကလေး၏ခရစ်ယန်အတွက်ဆုတောင်းခြင်း
3 ၂) ကလေးဗတ္တိဇံပေးရန်ဆုတောင်းချက်များ
4 ၃။ ဖိတ်ကြားချက်များကိုခရစ်ယာန်ဘာသာအတွက်ဆုတောင်းပေးခြင်း
5 ၄။ ခရစ်တိုဆုတောင်းခြင်း
6 ၅) နှစ်ခြင်းခံခြင်းဆုတောင်းခြင်း
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၏အရေးကြီးသောအရာယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အားလုံးအသိပညာဖြင့်ပြုမိသည်။ နှစ်ခြင်းခံဖို့ဆုတောင်းခြင်းကိုမိဘများ၊ ဘုရားရေးရာများ (သို့) အခြားမိသားစုဝင်များသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကဆုတောင်းရန်ဆုတောင်းနိုင်သည်။
ချစ်မြတ်နိုးသောကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖ၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုတင်ပြရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့သင်လာပါ (မိန်းကလေးနာမည်).
သူမသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောဥာဏ်ရည်ရှိသောမိန်းကလေးဖြစ်ပါစေ။ သခင်ယေရှု၏မိခင်မာရိကဲ့သို့အမျိုးသမီးတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်အထိသူသည်သင်၏ဉာဏ်ပညာနှင့်လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ကြီးပွားနိုင်ပါစေ။
မိန်းကလေးများတွင်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသည်၊ ၎င်းသည်သူတို့ကိုထူးခြားစေသည်။ ထို့ကြောင့်ဗတ္တိဇံခံရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်သူတို့အတွက်သီးသန့်ဆုတောင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက်ငယ်စဉ်ကတည်းကဘဝစတင်သည့်စိန်ခေါ်မှုများသည်အားကြီးနိုင်သည်။ သူတို့၏ဆုတောင်းချက်များကိုသင်ယူသောအခါသူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်နှစ်ခြင်းပေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါနောင်တွင်သူတို့အသုံးချနိုင်သောအစွမ်းထက်သည့်ကိရိယာများကိုချန်ထားခဲ့သည်။
ဘုရင်တို့၏ဘုရင်နှင့်သခင်တို့၏သခင်၊ မင်း၏ဘုန်းအသရေတော်ရှေ့၌ငါတို့၏သားကိုအသက်ကိုပေးတော်မူမည် (ကလေး၏အမည်).
ဤလှပသောကလေး၏မိဘများအနေနှင့်သင့်တော်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်သောကြောင့်ဘုရားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါ၏။ မင်းကိုဂရုစိုက်မယ်၊ မင်းကိုချစ်ပြီးဘဝလမ်းခရီးတစ်လျှောက်လမ်းပြပေးပါမယ်။ သင်၏အသက်တာတစ်ခုလုံးအတွက်သင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရှာရန်ယနေ့လည်းကျွန်ုပ်တို့လာပါပြီ။
ကိုယ်တော်၏ကျွန်မောရှေကဲ့သို့ “ဘုရားသခင်၏အဆွေ” ဖြစ်ပါစေ။ သူ့ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မကြာခင် သိနိုင်ပါစေ၊ သူသည် လောကီစနစ်ကို မနာခံဘဲ လုံးလုံးအောင်မြင်လိုသော ဆန္ဒကို လိုက်နာပါစေ။ သင်၏သွန်သင်ချက်များကိုလက်ခံရန် နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီး ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်သည် အရာအားလုံးဖြစ်တော်မူကြောင်း အသိအမှတ်ပြုရန် ပညာရှိဖြစ်ပါစေ။ စာပေနှင့် ဥပဒေများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စကားအပြောအဆို ကျွမ်းကျင်ပြီး မျိုးချစ်စိတ်ကြီးသော ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကြီးထွားမှုအလယ်၌အကြိမ်ပေါင်းများစွာသူတို့၏လမ်းခရီးတွင်အကြောင်းရင်းများစွာကြောင့်ထိခိုက်နိုင်သောကြောင့်ကလေးများအတွက်အထူးဆုတောင်းခြင်းသည်ကလေးများအတွက်အထူးနှစ်ခြင်းဆုတောင်းခြင်းသည်ချစ်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်း သခင်ဘုရား၏နှုတ်ကပါဌ်တော်ကကလေးငယ်နှင့်သခင်ဘုရား၏လမ်းစဉ်များကိုငယ်ငယ်ကတည်းကသင်ကြားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားပြောထားသည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားကျောင်းနှင့်ခမည်းတော်ဘုရားနှင့်ရင်းနှီးသောအချိန်ကာလများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ကယ်တင်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်၏သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့၊
ညနေ (၁း၀၀) နာရီညနေခင်းအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲသောအမေ၏ဗိမာန်တော်၌မေလ ၂၂ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်၏နှစ်ခြင်းခံရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ထို့နောက် San Luis 22. ရှိ Plan Street တွင်ရှိသော Lounge တွင်စားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်စောင့်နေပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါတို့အသက်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းငှါ၎င်း၊ (ကလေး၏အမည်/ ninã)မင်းကငါတို့ကိုမင်းသားတစ်ယောက်ပေးနေတာ။
သင်၏ဘ ၀ ကိုမင်း၏လမ်းပြမှုနှင့်ကာကွယ်မှုဖြင့်စတင်ရန်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးသည်။ သင်၏သားတော်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ကြောင်းသိပြီးကျွန်ုပ်တို့သားကြီးကြီးပါစေ။ သူ၏အသက်တာသည်အာဗြဟံ၏ဘ ၀ ကဲ့သို့ထာဝရရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါစေ။ သင်၏စကားနှင့်ဆုံးမinဝါဒများကို ယုံကြည်၍ ဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်သောဘုရားသခင်၏ဂတိတော်တို့ကိုပြည့်စုံခြင်းငှါအလိုငှါ၎င်း၊
ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေအတွက်ကောင်းချီး၊ ကျန်းမာသန်စွမ်း။ သန်မာသောသားဖြစ်ပါစေ။
မည်မျှပင်တိုသည်ဖြစ်စေမည်မျှပင်တိုတောင်းပါစေဆုတောင်းခြင်းသည်တန်ခိုးကြီးသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အမှန်ပင်အရေးကြီးသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သည့်ဥပမာများစွာရှိပါသည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်သင့်သောအရာဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်းကင်းမဲ့သောရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များနှင့်တိုတောင်းသောဆုတောင်းချက်များသည်တန်ခိုးပါ ၀ င်သည်။ ထိုအရာအားလုံးသည်သင်၌ရှိသောယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်ကြာရှည်သောအချိန်မဟုတ်ပါ။
ဗတ္တိဇံခံသောဆုတောင်းချက်အချို့ကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်သင်အလိုရှိပါကလက်ဝါးကပ်တိုင်ပုံစံဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သူတို့ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာငါတို့တွေ့သမျှအလှပဆုံးအရာပဲ။ အားသာချက်အပြည့်အဝယူပါ။
ဆုတောင်းခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါ စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစင်ကြယ်စေရန် ၎င်းသည်ဆုတောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးအားဖြင့်အသစ်တဖန်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးသည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အချိန်ယူပြီး ၀ ိညာဉ်ကိုကြွယ်ဝပြည့်စုံစေရန်ပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆုတောင်းရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့် အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်အားနာခံခြင်း၌အချိန်ကိုပေးခြင်းသည်အခြားမည်သည့်ပူဇော်သကာထက်မဆိုသာလွန်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစတင်သက်ရောက်သည်။ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ဝိညာဉ်ရေးကတိကဝတ်ပြုခြင်းကြောင့်နှစ်ခြင်းခံခြင်းသည် ပို၍ ပင်အရေးကြီးသည်။
ဗတ္တိဇံခံရန်ဆုတောင်းခြင်းသည်လုပ်ဆောင်မည့်အပြုအမူအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ိညာဉ်ကိုပြင်ဆင်ပေးသည်။ ဗတ္တိဇံသည်ကလေးသူငယ်များဖြစ်ပါကဤဆုတောင်းချက်များအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနာဂတ်အတွက်လည်းဆုတောင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ခြေလှမ်းများကိုအမြဲလမ်းပြပေးပြီး၎င်းတို့အားအချိန်တိုင်းအနီးကပ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
ဆုတောင်းချက်အားလုံး ယုံကြည်မှုဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်။ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့တောင်းသမျှသည်မည်မျှပင်ရှုပ်ထွေးစေကာမူ၎င်းတို့အားကျွန်ုပ်တို့သည်ဝိညာဉ်ရေးလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည်သေလွန်သူများကိုပင်သူတို့၏သင်္ချိုင်းတွင်းမှထမြောက်စေနိုင်သည် လာဇရု၏ပုံသက်သေ၌ဘုရားသခင် သူ၌ရက်ပေါင်းများစွာသေပြီးသားဖြစ်ပြီးစကားလုံးတစ်လုံးတည်းဖြင့်သာအသက်ပြန်ရှင်လာသည်။
ဒိုင်လူကြီး, အဆုံး, ဆန်းတို့စ